Maalintii ugu dambeysay si loo tirtiro taariikhda raadinta Google | Laga soo bilaabo Linux
Dhowr toddobaad ka hor Google ku dhawaaqay ujeedkiisa inuu iskutallaabta dhammaan xogta ay kaa hayaan. Qof walba. Ilaa maanta, adiga diiwaanka raadinta gebi ahaanba waa laga soocay alaabooyinka kale ee shirkadda, sida YouTube, Gmail, Google Docs, iwm. Laga bilaabo Maarso 1, 2012, caqabaddan ayaa soo dhici doonta.
En SlashDot taas ayay nagu baraarujinayaan maanta Waa maalinta ugu dambeysa ee aan u adeegsan karno shaqeynta uu soo bandhigo mashiinka raadinta Google si loo tirtiro taariikhdeena raadinta isla markaana loo joojiyo ikhtiyaarka aan ku badbaadin karno taariikhda la sheegay.
La Aasaaska Aasaasiga ah ee Elektronik ayaa dhajiyay tilmaamo fudud oo ku saabsan sida loo sameeyo.
Runtii way fududahay in la raaco. Waa tan nooca Isbaanishka:
Ku soo gal koontadaada Google mid kasta oo ka mid ah adeegyadooda.
Booqo cinwaankan: https://www.google.com/history.
Guji "Nadiifi dhammaan taariikhda shabakadda".
Qaado shan daqiiqo oo waqtigaaga ah oo samee hadda. Waa mudan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Maalintii ugu dambaysay si loo nadiifiyo taariikhdaada raadinta Google
Hagaag, kiiskeyga ma jiro ikhtiyaar lagu tirtiro taariikhda…. :(
Aad ayuu u fiicanyahay, si fiican ayuu iigu shaqeeyay
Dhab ahaan taasi aniga ayey igu dhacdaa, mise waa inaannaan mar dambe tirtiri karin?
Jawaab Juan Pablo Jaramillo Pineda
Runtii ma xasuusto, laakiin markaa mar hore ayaan naafo noqday?
Priscilla Morbello dijo
Waan awooday inaan sameeyo, mahadsanid macluumaadka!
Waxa aanan fahmin waa sababta "MAANTA ay tahay maalintii ugu dambaysay." Qoraalka 'SlashDot' ee lagu dhawaaqayo in la dhajiyay Arbacadii la soo dhaafay!
Jawaab Priscila Morbello
Waxaan qabaa su'aal: Waxaan galaa cinwaanka barta 2 oo waan helayaa, marka laga reebo qoraalka aanan soo saari doonin (laakiin taasi waxay loola jeedaa helitaanka raadin shaqsiyeed iyo talooyin ku saleysan dookhaaga), laba badhan: Mid dhaha « Maya Mahadsanid ”iyo badhanka labaad ee buluuga ah oo oranaya“ Dhaqaaq taariikhda webka ”. Tani macnaheedu maahan inaanan helin baaritaanka Google log, ama inaan naftayda iska demiyay mar uun oo aanan hadda xasuusan karin? Xaaladdaas oo kale maahan inaan wax kale sameeyo, sax?
Waad ku mahadsantahay soo galinta. Salaan.
Dhammaan taariikhdeyda ayaa diiwaangashan waana inaan tirtiraa
Ku jawaab carloshc
Waxay u badan tahay inay naafo ka dhigeen waqti kale haddana ma xusuustaan.
Hore ayaan usameeyay xoogaa kahor si aysan u badalin natiijooyinka raadinta. 😀
Runtii ma xasuusto naafayntiisa, waayadan dambe waxaan isticmaalayaa duckduckgo badan.
marka laga reebo aniga way i dhibaysaa in xayaysiintan ay ku rakibto google chrome.
Ma aanan ogeyn in boggaas taariikhdeyda uu jiray, hadda oo aan shaqeynayo xulashada taariikhda, raadinteyda google-ka mar dambe lama keydin doono? Xaqiiqdii waan isticmaali doonaa duckduckgo badan inkasta oo. waad ku mahadsantahay macluumaadka !!
Ku jawaab Cronos237
Mahadsanid. Waxaan sameeyay shalay.
Haddii Taariikhdaadu aysan muuqan iyo suurtagalnimada in la tirtiro, waxay ka dhigan tahay inaad horay u sameysay.
Waan curyaamiyey ikhtiyaarkaas waqti dheer ka hor, markaa taariikh ma lihi.
Aniguba waxaan adeegsanayaa mishiinka raadinta http://duckduckgo.com/ taasi kuma basaasayso.
Faahfaahin dheeraad ah: http://duckduckgo.com/about.html
Maxaa taariikhda loo tirtirayaa? si ay u xayeysiiyaan waxyaabo aan aniga i xiisaynayn? Sidii oo kale haddii taariikhda la tirtiro nuqul ma keydin?
Dhibaatada ku saabsan tixraaca "maanta" waa adiga oo aan ogayn waxa "maanta" ku saabsan yahay. Websaydhyo badan ayaan u xiisay taariikhda daabacaadda ee maqaal, runtii waa bummer. Uma maleynayo inuu jiro taariikh xiritaanka mowduuc kasta halkaan sidoo kale, ama waan indho beelay.
Si aysan wax uga beddelin maxaa? xitaa goobta juqraafi ahaan waxay sababi kartaa natiijooyinka raadinta inay kala duwanaadaan.
Marka iyagu isma beddelaan iyadoo kuxiran taariikhdeyda. Ku filan ayaa jabiya kubbadayda taas oo aan ku daro natiijooyinka dadka aan ogahay. Ma ahan wax qumman, laakiin ugu yaraan waa wax.
Waxa aan caadi ahayn waa in isla marka aad gasho Google, ay ku ridi doonto 95 buskud, 45 gmail, iwm ... kuwanna waxay leeyihiin 3 sano oo ...
Ma rabtaa inaad wax ka beddesho Choqok? Tani waa fursadaada